HORDHAC: Chelsea VS Dynamo Kyiv? wax kasta oo ku saabsan inaad ka ogaata kulanka ka dhacaya Stamford Bridge. – Gool FM
Bahiir March 7, 2019
(yurub) 7 March 2019 Kooxda ka dhisan Londone ee Chelsea ayaa garoonkeeda ku qaabileysa kooxda Dynamo Kyiv kulan katirsan lugta koowaad ee wareega 16-ka ee tartanka Eorupe league .
Bules ayaa guul raaxo leh ka soo gaartay kooxda Fullham kulankii ugu dambeeyey oo ay soo ciyaareen , geesta kale kooxda Dynamo Kyiv ayaa heysata saf dhameestiran oo ay kala hor tagi karto kooxda Bules kulanka caawa.
Chelsea waxa ay doonayaan in sanadkan ayaa meel wanaagsan ka gaarto tartankan wallow aya la kulmi doonto tartan xoogan madaama ay magcya kale oo waaween ay ka qeeb galayan tartanka sand ciyaareedkan .
Chelsea ayaa heysata saf dhameestiran oo ka fiyow dhaawac kualanka ay wajaheyso kooxda Dynamo Kyiv lugta koowaad ee wareega 16-ka.
Macalinka reer Italay ayaa markale la soo shirtagi doona safkii ugu dambeyey ee la ciyaaray kooxda Malmoe kulankii ugu dambeeyey ee wareega 32-da koox.
David Luiz ayaan ku soo bilaaban kulankii ay guusha ka gaareen kooxda Fulham horyaalka Premier League , balse laacibka reer Brazilian ayaa booska kala bixi doona Antonio Rudiger.
Marcos Alonso ayaa dib ugu soo laaban doono dambeedka daafaca bidix dhinaca kale Ruben Loftus-Cheek ama Mateo Kovacic ayaa badali doona Ross Barkley uu kulankii ugu dambeeyey ka soo muuqday khadka dhexe.
Benjamin Verbic ayaa ka ganaaxan kooxda Dynamo Kyiv kaddib markii uu qaatay hurdigii ugu dambeyey , xidiga lagu magacaabo Sidcley ayaa sameen kara safashadiisa ugu horeeyey ee sandka 2019.
Dynamo Kyiv ayaa dhankoodana heysata saf xoogan oo ay kala hortagi karto kooxda Chelsea oo garoonkeeda ku ciyaareysa .
Kulanka : Chelsea VS Dynamo Kyiv ( Europe League )
Garsoorka : Slavko Vincic (Slovenia)
Chelsea ayaa markeedii sedexaad ayey wajihi doonta kooxda Dynamo kyiv , labdii is arag ee hore kulana Bules ayaa badisay halka kulanka kalana uu bareejo ku dhamaaday waxa ayna isku arkeen tartanka Champions League xili ciyaareedkaa 2015-16 heerkiisa guruubyada.
Dynamo kyiv marna kuma aysan badin kulan katirsan tartamada yurub iyada oo ku ciyaareysa ciida England ,kooxda reer Ukrain ayaa bareejo gashay sedex kulan halka ay qasareen 11-kale 14-kii kulan ee ugu dambeeyey .
Chelsea markii ugu dambeyey oo ay heerkan ka soo muuqato wax ay aheyd xili ciyaareedkii 2012-13 oo la ogaa in ay ku guuleesteen tartanka waxaana waqtigaas hogaamiye u ahaa macalinka lagu magacaabo Rafa Benitez.
Dynamo kyiv marna ma aysan badin 9-kii kulan ee ugu dambeeyey kulanka lugta hore ee heerka bug baxa tartanka Eorup League ( 6-bareejo iyo 3-qasaaro) markii ugu dambeyey oo ay kaga badiso garoonkeeda koox ka socota England heerkan oo kale waxa ay aheyd sandii 2011 waxa ayna garoonkooda ugu adkaadeen kooxda Man City.
Xidiga reer Barazil ee Willian ayaa ku lug yeeshay 7-gool xili ciyaareedkan tartanka Europe League (2-gool iyo 5-caawin) ma jiro xidig kale oo Chelsea oo tiro intaa ku lug yeeshay tan iyo Juan mata oo ku lug yeeshay (12 gool ) iyo Fernado Torres oo ku lug yeeshay ( 9 gool ) xili ciyaareedkii 2012-13 markaas oo ay hanteen tartanka Europe League .
Manchester United oo soo laabasho cajiib ah sameesay, kadib markii ay si waali ah kaga adkaatay kooxda PSG + SAWIRO